Bakhungathekile eMkhandlwini iMeneja ingabonwa – Ubukhosi
Home/ Umkhandlu/Bakhungathekile eMkhandlwini iMeneja ingabonwa
Bakhungathekile eMkhandlwini iMeneja ingabonwa
Ubukhosi News March 16, 2018
IMeya uNkk uDixie Nciki
SEKUNOKUDIDEKA “ngokunyamalala” kwemeneja kaMasipala uMuziwabantu, ongaphansi kwesifunda Ugu, okuvela ukuthi selokhu yaqashwa ayikaze ilubhade emsebenzini yize kwakufanele iqale ekupheleni kukaNhlolanja.
UMnu uMbhekiseni Kubheka kwakubhekwe ukuba aqale emsebenzini mhla zingama-27 kuNhlolanja wezi-2018 ngemuva kokuthi kwase kuphele isikhathi senkontileka kaMnu uSazi Mbhele owayeyiMeneja.
Lokhu sekwenze amaqembu aphikisayo abenokusola ukuthi ukungafiki emsebenzini kukaKubheka kungenzeka ukuba kudalwe ukungezwani kwamakhansela kaKhongolose angazange avote ndawonye ngokuqokwa kwakhe.
IKhansela leDA uMnu uVictor Mbatha likhale ngokuthi akekho umuntu okhona kulesi sikhundla njengoba noKubheka engafiki.
Uthe isiyabadida le ndaba kaKubheka ukuthi yini edala angezi emsebenzini ekubeni kade aqashwa kwaze kwenziwa nesimemezelo.
“Inkinga enkulu iqale ngesikhathi iMeya, uNkk uDixie Nciki ebuya esibhedlela njengoba ebelalisiwe nalapho sithole ukuthi usebhalele incwadi uMphathiswa Wezokubusa NokuBambisana Nezindaba ZoMdabu uNkk uNomusa MaDube Ncube, emazisa ukuthi uMkhandlu uvumelene ngokuba kwelulwe isikhathi senkontileka kaMbhele. Empeleni wayekhuluma iphutha ngoba asikaze sihlale phansi njengoMkhandlu sixoxe lolu daba ngoba kwabanenkinga yokuthi wangeniswa esibhedlela. Lolu daba siludlulisele kuMphathiswa. Sabhalela ngisho uSomlomo woMkhandlu, uMhlonishwa uMzwandile Mnyandu. UMphathiswa ungenelele ngokuthi asinikeze amagama abantu abathathu esingakhetha kubo umuntu ozobamba isikhundla sokuba iMeneja. Kula magama amathathu saqoka uKubheka kodwa iMeya namanye amakhansela babengayizwa indaba yakhe. Lokhu kwadala ukuba amalungu kaKhongolose aphazamise umhlangano agibele naphezu kwezihlalo, ekhala ngokuthi awaphelelanga kushoda uMbhele obefunwa iMeya,” kusho uMbatha.
Uqhube wathi kusuka lapho izinto azizange zisahamba kahle eMkhandlwini ngoba iMeya ayivumelani namakhansela anqume ukuba kuqashwe uKubheka.
UMbatha ukhala ngokuthi kumanje sebebikelwa ukuthi uKubheka akafiki emsebenzini ngenxa yokuthi uphesheya nokuyinto abangasayikholwa ngoba basola sengathi uyesatshiswa.
“Ngisho abasebenzi bakaMasipala abali-170 besingazi ukuthi bazogcina beholile yini ngenxa yokuthi iMenenja ayikaze ilubhade emsebenzini selokhu yathunyelelwa incwadi eyazisayo ukuthi isingaqala emsebenzini,” kusho uMbatha.
IDA kulo Masipala isola ukuthi neMeya uNkk uNciki ingaphansi kwengcindezi yokuthi kufanele ibuyise uMbhele esikhundleni yize esephelelwe isikhathi.
UMnu uSazi Mbhele
UMbatha uthe bakusola lokhu ngoba babone amalungu kaKhongolose abephazamisa umhlangano ekugcizelela ukuthi afuna uMbhele.
Ngesikhathi ethintwa uNkk uNciki uthe alikho iphutha alenza ngokulula inkontileka kaMbhele.
“Mina nganikezwa yiwo uMkhandlu igunya lokusingatha udaba lokuqashwa kweMenenja nokuqinisekisa ukuthi ngisho isikhathi sikaMbhele sesiphelile kodwa uMkhandlu awubinazo izinkinga. Yingakho ngabhalela uMphathiswa ngimazisa ngokwelula inkontileka kaMbhele. Okunye engifisa kucace ukuthi ngemuva kwalokho uMphathiswa wabe esesibhekela abantu esingakhetha kubo ongabamba kulesi sikhundla. Kwabe sekufika la magama okuhlanganisa elikaMnu uMgezeni Ngonyama noKubheka. Lowo mhlangano wawumhla ziyisi-9 kuNhlolanja. Okwenzeka ukuthi amanye amakhansela kaKhongolose aqoka ukuvota ne-IFP eyayifuna uKubheka. Yilokho okwathukuthelisa amalungu kaKhongolose ukuthi singabakanjani nabantu abathunywe ukuba bazomela iqembu bese bona befika bavote neqembu eliphikisayo. Ngikhuluma nje udaba lwalawo makhansela lusaphenywa uSotswebhu wethu uNyathi,” kusho uNkk uNciki.
Okunye akucacisayo okokuthi uKubheka nakuba babengahambisani naye beyi-ANC kodwa ngokuthi badayiswa amanye amakhansela abo kuKhongolose, wagcina uKubheka eqokiwe.
Uthe kumanje uKubheka ubambile ngoba bathathe isinqumo sokuba isikhundla sakhe sikhangiswe kabusha mhla zingama-28 kuNdasa ukuze kuqashwe omunye.
Uqhube wathi nakuba uKubheka bekufanele aqale emsebenzini mhla zingama-27 kuNhlolanja kodwa ubengakaze afike emsebenzini ngoba ubambeke phesheya.
“Ngesikhathi eqashwa sathola ukuthi uphesheya engumuntu ozobuya maduze. Mina njengeMeya ngiyaxhumana naye futhi wakwamukela ukuqashwa kuMasipala wethu. Ngaphandle kwalokho njengoba abasebenzi bekwazile ukuhola bekunguye osayinile. Nawo uMkhandlu ngingasho nje ukuthi uyaqhubeka nokusebenza ngaphandle kwezinkinga ngoba akukabibikho osekudinga ukuba simise izinhlelo ngenxa yokuthi uKubheka akakabuyi phesheya. Kulesi sikhundla uzobamba kuze kube sithola umuntu ofanelekile,” kusho uNkk uNciki.
Uthe amanga aluhlaza ukuthi uKubheka akekho emsebenzini ngoba esatshiswa, wathi sebekhathele ikhansela leDA elikhuluma izinto ezingelona iqiniso ngoMkhandlu.
USomlomo woMkhandlu, uMnu uMzwandile Nyathi uthe alikho iphutha elenziwe yiMeya ngoba yabhala incwadi ihambisana nezivumelwano ezathathwa ngoMfumfu mayelana nokwelulwa kwenkontileka kaMbhele.
Ube eseqinisekisa ukuqashwa kukaKubheka, wathi ngesikhathi enikezwa umsebenzi ubevele ephesheya.
Uthe uKubheka ubehambe ngokomsebenzi wakhe awenza eMnyangweni wezeMidlalo.
“Ngaphandle kwalokho kulolu daba lwamakhansela kaKhongolose avote neDA ne-IFP, silubukile udaba sabe sesiludlulisela ebuholini besiFunda bukaKhongolose. Nokho siyazi ukuthi amaqembu aphikisayo ayagiya lapha ngaphakathi asebenzisa ukwehlukana okukhona emakhanseleni ethu yingakho egcine ephumelela evota nawo emhlanganweni esasinawo wokuqoka iMenenja. Nakuba kunjalo lolu daba lungolwasekhaya,” kusho uNyathi.
INkosi uDinuzulu yabamba iqhaza ngeMpi Yamakhanda
Kulindwe uMnyango ngozovala isikhala sikaSomlomo